Faallada: Qudabaddii Siilaanyo sida ay u dhan dhameysey iyo dhibtu meesha ay Somaliland kaga soo maaxanayso. | Awdalpress.com	Qoraalo | Tacliiq Raaci | E-mail / Home
Faallada: Qudabaddii Siilaanyo sida ay u dhan dhameysey iyo dhibtu meesha ay Somaliland kaga soo maaxanayso.
Both comments and pings are currently closed.	Faallada shabakaddan awdalpress.com waxan ku qaadaa dhigaynaa,
Qudbaddii uu Siilaanyo warqadda ka akhriyayey iyo nuxurka ay xambaarsanayd.
Sidoo kale waxa aan ku soo qaadanaynaa siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland sida ay u wiiqday xukunka Somaliland.
Ugu dambayna waxa aan faallada ku soo gaba gabayn doonnaa haybta qabiil iyo sida ay shabakaduhu uga kala faalloodaan siyaasadda qabyaaladaysan ee Somaliland.
Ugu horreyn, waxa ay qudbadda Ahmed Siilaanyo ee sannad laha ahi ku soo beegantay wakhti xasaasi ah, oo weliba dadka lagu kiciyey dhawaqii Ingiriiska ka soo yeedhay. Intii aanu Ahmed Siilaanyo soo gelin gurigii uu ka dhex qudbadaynayeyna waxa uu soo dhex jeexay shacab ay qaarna isaga ku muddaharaadayeen qaarna ka muddaharaadayeen dhawaqii Ingiriiska ka soo yeedhay.
Haddaba qudaddan oo inta badan laga soo dheegtay hadallada Wasiirka Arrimaha Dibaddda Somaliland uu saxaafadda marayo, ayaa ahayd mid aan dadka ku cusbayn. Balse waxa ay dadku xiiso badan u qabeen in ay maqlaan Ahmed Siilaanyo oo muddo aammusnaa, dalkuna uu qasnaa, oo bari iyo galbeedba ay shaqaaqooyin ka jireen. Arrimahaa jiray oo xasaasi ahaana aanu marnaba ka hadlin.
Waxa uu mimbarka la soo fadhiistay warqad la soo qoray, oo marka uu akhriyayo uu foorar ku akhriyayey. Qoraalkaasi oo la isku dayey in loo qoro mid hab dublamaasiyadeed ahaa ayaan xidhiidhsanaantiisu ahayn mid loo bogay. Waxana ka muuqatay dhalliilo badan iyo hadallo sarbeeb taban ah.
Marka qudbaddaa loo tarjumay English ayaan wax macno ah samaynayn. Waxana u badan faan iyo isku dhererin dawladda Ingiriiska iyo ta Somalida ah. Hanjabaad iyo in aan cidna loo joojinayn gooni isku taagga ayaa ku badnayd. Waxqabad aan sharraxaad mug leh lahayn ayaa iyana ka muuqatay.
Arrimaha lagu beerlaxawsanayey dawladda Maraykanka ayaan sal iyo raadtoona lahay, waxana hore looga maqlay wasiir Maxamed Cabdillaahi. Dawladda Maraykanka waaxdeeda Afrika iyo State Hous-ka markii aan la xidhiidhnayna waxa ay awdalpress.com heshay in aanay jirin arrimo Somaliland ku saabsan oo ay is dhaafsadeen mas’uuliyiinta Maraykanka iyo Somaliland madaxdeedu, meel qoraal noocaasi ah lagu soo qorayna ma jirin.
Taasina waxa ay ka mid ahayd propaganda-ha lagu khaldayo shacabka. Waxa kale oo uu Ahmed Siilaanyo madasha aad uga akhriyey in aan Somaliland jiritaankeeda iyo masiirka dadka cidina waxba ka baddali karin. Hadalladaa iyo kuwo kale oo beer-xablayaasha hor fadhiyey lagaga qiiraysiinayey ayaa aad loogu sacabbiyey. Wax su’aala ah oo la is weydiiyeyna may jirin.
Gobollada bari in la dhiso oo horumarintooda ay dawladdu ka hawl geli doonto ayaa uu madasha ka sheegay. Warkaasina waa mid muujinaya sida uu Ahmed Siilaanyo cabsida uga qabo shacabka gobollada bariga ee ay qaar dagaallada kula jiraan. Waana mid caado u ah in cidda uu ka baqayo uu ballamo u qaado. Waxa kale oo uu ballamo u qaaday in uu casriyeeyo ciidammada sii kala daadanaya ee Somaliland.
Arrimaha Dibadda Somaliland.
Somaliland rajo ay lahaan lahaydba waxa albaabada u soo ooday siyaasadda arrimaha dibadda ee lagu hago. Waxana dhalliisha weyn u soo hooyey wasiirkeeda Mahamed Abdillaahi oo aad looga dayrinayo, dadkii dibaddana ay siyaasaddiisu kala qaybisay.
Waxa xadhkaha goostay dhammaanba aqoon yahannada ka soo jeeda beelaha darifyada Somaliland, waxa sii xoogaysanaya mucaaridka Somaliland ee qurbaha. Iqbal iyo ajaanib kale oo la shaqayn jiray siyaasadda gooni isku taagga Somaliland ayaa wasiirka arrimaha dibadda daraaddii uga baxay arrimihii ay Somaliland ugu ololayn jireen.
Ahmed Siilaanyo iyo inta ay talada dalku ka go’daana weli ma arkaan dhalliishaa sida cadceedda u soo ifbaxday ee cid walbaa arkayso.
Saxaafadda Somaliland ee qabiilaysan. Mar aan maanta isha marinayey shabakadaha waxa aan la yaabay dagaalka hoose ee ka dhexeeya beelaha dhexe. Tusaale ahaan waxa aan Haatufka maanta ka akhriyey hadallo loogu kala dabqaadayo wasiirka arrimaha dibadda oo ka soo jeeda beesha Sacad Muuse iyo guddomiyaha Baarlamanka Cirro oo ka soo jeeda H/Yoonis. Waxana qoraalka aan la yaabay uu ahaa, marka ay Cirro ku tibaaxeen in uu waxba ka sheegi waayey wasiirka arrimaha gudaha oo ay isku beel yihiin, ee uu wasiirka arrimaha dibadda oo aan isagu ka mas’uul ahayn amniga uu aad u dhalliilay. Laakiin waxa ay illoobeen in wasiirka arrimaha dibaddu uu markiiba ka jawaabay arrintii Ingiriiska, halka uu u dayn lahaa wasiirka amniga qaabilsan, oo ah wasiirka arrimaha gudaha Duur. Bal hadda nala akhriya maqaalkaa:
Cilmiga siyaasada waxa jirta qaacido aasaasiya oo sheegaysa in ku qancinta caalamka ee siyaasada arrimaha dibadu ku xidhan tahay marka ay siyaasada arrimaha gudaha ee dalku noqoto mid guulaysata oo lagu najaxo. Hadaba waxay iskaga khaldantay ninkii Cirro ee Diblomaasiyada lagu tirin jiray oo halkii laga filayey inuu Wasiirka Arrimaha gudaha canaanto waa ninka aayar oo dhalatay Wasiirka Arrimaha Dibada wax ka saaray Amaanka arrimaha gudaha.
Sawkan u hadlay siddii oo uu Kaambayn ku jiro ee iloobay inuu yahay Masuulka saddexaad ee dalka. Adeer in badan baa la lahaa isku qabana kari maayo gudoomiye-nimada Wadani iyo Wakiilada’e, kol haday taasi maanta cadaatay oo uu u xagliyey dhinaca xisbigiisa, hadaba isna jagada ha u baneeyo cidd kale oo u gacan banaan hawlaha Baarlamanka. Shabakadda kale ee halbeegnews.com ee aadka wax uga sheegta dhalliisha dawladda ayaan u bogay maqaal ay ku soo qaadatay sida ay u dhigeen warkii Ingiriiska iyo falka nacasnimo ee ay dawladda Somaliland kala hor timid. Bal ila akhri:
Hawraarta Halbeegnews: Nin dawee la leeyahay, Danbi uu badh leeyahay, Xalka Doon la Leeyahay, Isaguu u Daranyoo Inuu Daaro Ma Ogolla Daaraanta Mililka Leh »
Waatan geenyadii Diran, iska soo durdurisee, duufaanka wadatee, ma la waayey dabar adag, iyo wiil dardara qaba” Hargeysa (Halbeegnews)-27/01/2013-…
Sidoo kale waxa aan isha mariyey shabakadda kale ee Qaran oo ka digaysa lacag Somaliland ay soo daabacatay oo balaayiin ah taasi oo ay ku sheegeen in ay sicir barar iyo dhaqaalo xumo u horseedayso. Halka ay dawladda Somaliyana ay soo daabacanayso lacag adag oo dalka oo dhan ka shaqayn doonta. Isla markaana meesha ka saari doonta lacagta shinka Somaliland ee aan meella laga ictiraafsanayn. Lagana yaabo in shirka London lagu soo saaro arrin ku saabsan lacagtaa iyo sida ay u wadaagi doonaan Somalia iyo Somaliland. Kaddibna lacagta Somaliland ay suuqa uga bixi doonto. Malaha warkani waaba digniin.
Bal maqaalkiina waa kani ee nala akhriya.
Jan 30th, 2013 at 05:51 PM
Xukumada Siilanyo oo lacag cusub oo Noodha soo daabacatey,sixir barar iyo sarif barar la filaayo maalmaha fooda inagu soo haya!
Waa innoo faalladeenna dambe
This post has been viewed 2189 times.	Categories: Daily Somali News